Ny Lesona Azon’ny Hetsika Erantany Momba Ny Toetrandro Tsoahana Avy Ao Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Desambra 2014 7:20 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Français, polski, English
Amazon. Sary: Mariusz Kluzniak (Flickr)
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Hoda Baraka ho an'ny 350.org, fikambanana iray manangana hetsika erantany momba ny toetrandro, ary naverina navoaka tato amin'ny Global Voices noho ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Manana tantara lavabe amin'ny resaka hetsi-bahoaka i Amerika Latina, na io ho an'ny tontolo iainana, politika na toekarena. Amin'izao fotoana izao ireny hetsika ireny dia mipetraka ho hery lehibe ara-tsosialy sy ara-politika mandrafitra betsaka ny zava-misy any amin'ilay faritra.
Ireto ambany ireto ireo zavatra nasongadin'ny fifanakalozan-dresaka niarahana tamin'ireo mpikatroka mafàna fo mpiaro tontolo iainana ao Amerika Latina, nitondra fanazavàna momba ny maha-toka-miavaka ny hetsika momba ny toetrandro any amin'ny faritra sy ny zavatra azon'ny hetsika erantany ianarana avy amin'ity ohatra iray manainga fanahy ity.
1. Manaraka ny fiovaovàn'ny fotoana
Mitovy amin'ireo faritra hafa any amin'ny Ilabolantany Atsimo, mitohy mizaka ny firoson'ny fivoaran'ny tanan-dehibe i Amerika Latina satria mikisaka miala ny faritra ambanivohitra mba hamonjy renivohitra ny vahoaka mba hitady fitadiavam-bola metimety kokoa. Na dia miteraka olana marobe ara-tontolo iainana aza ny fanaovana tanàna, ary hita fa tena vosaovoky ny kolontsain'ny tanan-dehibe ny kolontsaina handàla ny fiainana ambanivohitra, raha ny tranga hita ao Amerika Latina dia manambatra ny heriny ireo vondrona mpikatroka mafàna fo avy any ambanivohitra sy an-tanàn-dehibe mba hiatrehana ny olan'ny toetrandro.
Araka izany, tsy miandry fotsiny ny hianjadian'ny fiovaovan'ny fotoana baikoin'ny fanamboarana tanàna, fa mampifanaraka ny ataony amin'ny zava-misy sy manambatra ny heriny ry zareo, miaraka amin'ireo vondrona tanora mpikatroka mafàna fo vao misondrotra avy any amin'ireo faritra an-tanàn-dehibe.
Araka ny hazavain'ilay Peroviana mpikatroka mafàna fo, Majandra Rodriguez Acha, iray amin'ireo mpamorona ny vondrona fikatrohana fantatra amin'ny hoe TierrActiva Peru, hoe:
Mihevitra aho fa vaovao ny hetsika momba ny teotrandro aty Amerika Latina, saingy efa somary antitra ihany koa. Nihetsika momba ireo olana mifamatotra hatry ny ela amin'ny fiovaovàn'ny teotrandro avokoa ireo vondrona voakasika mivantana amin'ny fiovaovàn'ny toetrandro, toy ny vondron'ireo vazimba teratany, ny vondrom-behivavy ary ny vondron'ny tantsaha; nefa heveriko koa fa amin'ny maha-hetsika an-tanandehibe sy tarihan'ny tanora azy ity, dia toy ny hoe vaovao ihany amin'ny lafiny sasany. Hetsika iray maroloko sy mitombo be izy ity ary betsaka izao ny olona no mahafantatra ny atao hoe fiovaovan'ny toetrandro sy ny fiantraikan'izany amin-dry zareo sy ny hafa ihany koa anatinà tranga samihafa.
Henoy ity podcast eto ambany ity izay iresahan'i Majandra koa ny momba ny zava-misy mahakasika ny fiovaovan'ny teotrandro ao Amerika Latina, sy ireo vondrom-piarahamonina idonany, ny loza mety hiandry amin'ny maha-mpikatroka mafàna fo ara-tontoloiainana ao amin'ny faritra, sy ny sisa.
2. Natambatry ny tolona hisian'ny fahavelomana maharitra
Ny tondroin'ireo mpanaramaso ho hetsik'i Amerika Latina momba ny toetrandro, raha ny marina, dia ny fitambaramben'ireo hetsika marobe tonga miaraka. Tsy hoe manampy hery fotsiny ho an'ny tolona hiadiana amin'ny fiovàn'ny toetrandro io, fa koa taratra maneho tsara ny fiantraika marindranon'ny fiovaovàn'ny toetrandro noho izy io miantraika amin'ny fivelomana, ny asa, ny fahasalamàna ary mbola mihoatra lavitra noho izany aza.
Ny fahatongavan'ireny hery rehetra ireny hiaraka dia mitondra ny fifanakalozana hevitra momba ny toetrandro ho amin'ny haavo ambonimbony kokoa sy mampiseho dingana iray vaovao tanteraka amin'ny fanaovana tsindry amin'ireo governemanta (izay taraiky amin'ny hetsika momba ny toetrandro) no sady manampy hery mihitsy ireo feo samihafa mampitambatra y antsony hanaovana hetsika ho an'ny teotrandro.
Nicky Scordellis, mpikatroka mafàna fo amin'ny resaka toetrandro, izay efa an-taona maro no nanatevina laharana ny hetsika Boliviana ho an'ny teotrandro ary ao anatin'ny vondrona fikatrohana TierrActiva Bolivia, no manazava :
Manana an'ity hetsika goavana ity i Amerika Latina, izay mazàna no tsy mitonona ho hetsika momba ny toetrandro, nefa ny zavatra ataon-dry zareo dia ampahany tanteraka amin'ireo tolona ho fanoherana ny fiovaovàn'ny toetrandro. Ny singa roa lehibe mitàna toerana ao : ny iray dia ny fanoherana ary ao Amerika Latina dia misy ireo hetsika goavana anoherana ireo tetikasa goavam-be, fitrandrahana solika azo avy amin-javatra lò, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, izay ny ankamaroan'ireny dia mifamatotra amin'ny olan'ny faritra onenana sy ny zon'ireo vazimba teratany, nefa raha ny marina dia mifandray amin'ny olan'ny fiovaovàn'ny teotrandro daholo izy rehetra ireny no sady miha-mahery vaika izany amin'izao fotoana izao ao Amerika Latina ao. Ary etsy ankilan'izany dia ny vahoaka manangana zavatra hatao fanolo ; manerana an'i Amerika Latina dia ahitàna ireo traikefa tsy mampino aminà tetikasam-panorenana ho fanolo ataon'ireo olona manorina vondrom-piarahamonina, miasa amin'ny fampiasàna ny zavatra voajanahary hita aeo an-toerana mba hanorenana trano miaro ny tontolo iainana sy zaridaina an-tanàn-dehibe, hita mitranga manerana an'i Amerika Latina ireny. Heveriko fa ireny no tena faran'izay matanjaka sy feno hery raha resaka fomba hiatrehantsika ny fiovaovàn'ny toetrandro no resahana ary heveriko fa tena mavesa-danja ho an'ireo hetsika maneran-tany ny mijery izay mitranga manerana an'i Amerika Latina sy mianatra avy amin'ireny traikefa ireny.
Henoy ity podcast eto ambany ity izay iresahan'i Nicky koa mikasika ireo mpikatroka mafàna fo momba ny teotrandro ao Bolivia sy ny fomba fiasan-dry zareo mba hifandraisana amin'ireo vondrona mpikatroka mafàna fo hafa momba ny teotrandro manerana ny faritra.
3. Atosiky ny fifamatorana mahery vaika be amin'ny tanin-dry zareo
Manerana an'i Amerika Latina dia marobe ireo fombam-pinoana nentin-drazan'ireo vazimba teratany no maneho ny fitsipi-pitondrantena ho fanajàna ny fiainana tsy an'olombelona, indrindra fa ho an'ireo toerana sy tontolo manodidina azy, ary ho an'ny Tany mihitsy amin'ny maha-tany azy. Vokatr'izay, io fandalàna ny natiora io dia hita taratra ao anatin'ny filàna fiainana mirindra miaraka amin'ny tontolo iainana, amin'ny fanajàna sy fiarovana ny rafi-pifandrindràn'ny zavatra rehetra mahatonga ny fiainana hisy eto amin'ity planeta tany ity .
Ao anatinà tontolo iray fehezin'ny fikatsahana tombontsoa, madobe no mijery ny natiora ho toy ny loharanon-karena tsotra fotsiny, izay tokony hotrandrahana mba hahazoana tombony ara-toekarena. Hiatrehana izany fitiavan-karena izany, ary ny faharavàna aterany, marobe ireo vondrom-piarahamonin'ny vazimba teratany no nijoro niaro ny natiora, izay indrisy fa matetika tokoa no miafara hatramin'ny famoizan-dry zareo ny ainy.
Maneranaan'i Amerika Latina, amin'ny fanorenana miainga avy any amin'ny fototra maha-vazimba teratany azy ireo, betsaka no nampiditra ireny fomba fisaina sy fombam-pinoana nentin-drazany ireny ho ao anaty fomba fampandrosoana mivelatra kokoa. Nt tsimoka nitondra ity fomba fampandrosoana ity dia ny fanaovana ny zavatra hiverina ho an'ny vondrom-piarahamonina sy fampifandanjana azy ara-ekôlôjika ary mijery akaiky ny kolontsaina. Ny fomba iray tena fantatra be izao dia ilay antsoina hoe hetsika Buen Vivir/ Miaina Finaritra, teraka tany Ekoatora ary nahazo fàka avy amin'ny fomba fijery ny tontolon'ireo vahoaka Quechua ao Andes.
Betsaka tamin'ireo hetsika sôsialy hafa manerana an'i Amerika Atsimo no naka aingam-panahy avy amin'izy ity ary nanitatra ny hetsika, no sady koa nifandray tamin'ireo rafi-pinoana vazimba teratany hafa, toy ireo vahoaka Aymara ao Bolivia, ny Quichua anyEkoatora ary ny Mapuche ao Shily sy Arzantina.
Raha hamaky misimisy kokoa momba ny hetsika “Buen Vivir” dia ao amin'ny The Guardian: “Buen Vivir: the social philosophy inspiring movements in South America (Eng)” – Buen Vivir : ilay filôzôfia sosialy miteraka aingam-panahy ho an'ireo hetsika any Amerika Atsimo